Marii yaungabhadharira iyo Super Mario Run? Nintendo inoda kuziva | IPhone nhau
Marii yaungabhadharira iyo Super Mario Run? Nintendo anoda kuziva
Wanga uri mutambo wegore, nemvumo kubva kuPokémon GO, Super Mario Run Ungangove wainyanya kutarisirwa mutambo munhoroondo yemafoni nhare mushure mekuunzwa kwekupedzisira Keynote mharidzo yeiyo nyowani iPhone 7 munaGunyana. Uye ndeyekuti hushamwari hunhu hwaNintendo anga ari shamwari yevakawanda vedu mukutanga kwedu munyika yemitambo yemavhidhiyo, ese Nintendo vhidhiyo mutambo wevanyaradzi vanga vari kupomera isu tese takamirira nechido chikuru cheiyo Super Mario Run.
Ehezve, mukutarisana netarisiro yakawanda kwazvo zviri nyore kwatiri kuti timboora mwoyo nekukurumidza, uye isu tinofanirwa kuziva kuti hatina mumaoko edu Game Boy kana chero chinhu chakadai, iyo Super Super Run Run inochinja. kune zvikwangwani zveiyo iPhone uye nekudaro izvo zvinoshandura mutambo wemitambo kuti uve "mumhanyi". Kana isu tichiwedzera kune izvo kuti titambe nyika inopfuura imwechete tinofanira kubhadhara, dzima tiende. Ehe, kune dambudziko nefilosofi yekubhadhara mitambo kana kunyorera, iro dambudziko raivepo nefirimu nemumhanzi, uye kubva pane zvinoita kunge tiri kupora. Nintendo akacherekedza uye ari kutumira kuongorora kubvunza nezvemutengo wataizobhadhara mushanduro dzeramangwana.
Sezvauri kuona mumufananidzo wapfuura, Nintendo anotibvunza mubvunzo wakajeka: Yakawanda zvakadii yaungabhadhare iyo yakazara vhezheni yeSuper Mario Run? Mubvunzo uri mukati me chisarudzo iyo Nintendo iri kutumira mamwe vashandisi vakabatanidza Super Mario Mhanya neiyo My Nintendo account. Mubvunzo unouya kuzoita ongororo yeavo vese vashandisi vanogunun'una nezve kubhadhara € 10 yemutambo uzere, hongu, hatizofanirazve kubhadhara semamwe mimwe mitambo.
Uye kwete chete nezve mutengo, sezvaungaona, Isu tinobvunzwawo nezve kufarira kwedu mushanduro nyowani yeSuper Mario Run, uye ndizvo haana kufarira mutambo wemitambo futi, uye zviri pachena kuti ichi kiyi kune vashandisi kuti varambe vachifarira mune ramangwana shanduro.
Ini pachangu ndinotenda izvozvo nyaya yemutengo inyaya yefilosofi yemaharaZvakajairika kufunga kuti mashandisiro nemitambo yedhijitari inofanirwa kunge iri yemahara, hapana munhu anotarisisa mutengo unobatanidzwa mukuvandudza kwavo. Ehe, iwe unogona kugara uchitaura kuti Nintendo ine mari yakakwana uye kuti makambani makuru anotora mari yese, asi ichokwadi icho Aya makambani anotora vanhu vanoita raramo kubva pane izvi uye nekudaro hatifanire kutyisidzirwa nekubhadhara € 10 yemutambo. Hapana munhu anotimanikidza, saka mushure mekuyedza matanho ekutanga iwe unogona kusarudza kana zvakakodzera kuramba uchiridza Super Mario Run.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Marii yaungabhadharira iyo Super Mario Run? Nintendo anoda kuziva
Ini ndinoda kubhadhara iyo izere app kunyangwe iri 9 euros, uye kwete chitsotsi chemahara kutamba chitambi chaunoziva 4,99, 9,99, 49,99 uye 99,99 euros kuti urambe uchifambira mberi. isu tinopenga here kana chii, ivo vanofanirwa kuve izvo iwe zvaunobhadhara uye nekusingaperi zvese zvisina kuvhurwa. Ndakaitenga uye handizvidembi. Ndinoziva kuti ndine zvakakwana uye handifanirwe kushandisa yakawanda. zvakare kuchema kwese kunokosha 9 euros uye vane mumaoko avo nhare yakakosha kakapetwa makumi masere, ndezvekuti isu mapenzi kana kuti chii?
Kana isingatengeswe uye mukati mevhiki vanoidzikisa kusvika ku4,99 euros, uyo ane chiso chebenzi ndiye uyo mazuva mashoma apfuura akange abhadhara iyo € 9 …… ..
Kunze kwefilosofi yemahara, iyo mumitambo yakamirirwa kwenguva refu inogona kuve yakasarudzika, nemutambo uyu ini ndinowana matambudziko maviri. Yekutanga, kuti mutengo wakaderera uchienzaniswa nemamwe mapuratifomu, asi anodhura kana tichitaura nezvenhare. Izvo zvinokonzeresa izvozvo, kana uchiona mutengo, zvinoita kunge zvakawandisa kwatiri. Uye rimwe dambudziko ndeye mania yekuchinjisa mitambo yese kune imwechete michina pane nhare mbozha. Chaizvoizvo mabatidziro ekubata enharembozha anofanirwa kukubvumidza iwe kuve neakawanda masimba, kwete mashoma. Vanomhanya vanoita seni semitambo inoda yakawanda yekudzidzira kutamba zvakanaka, yakawandisa kune chishandiso icho chatingangoshandisa mune shoma shoma nguva. Ivo vanounza kumwe kunetseka uye kudzikamisa rusununguko rwekufamba. Iyi, yeSuper Mario, ishiti, nekuti zvaive zvakajairika kudzokera kumashure nekuti isu tanga tarasikirwa nemari, kana kumira kusvikira ruva rave kuvanzwa. Pasina kutaura nezve kuyedza ese mapaipi nemakona, ingangoitika. Neshanduro iyi zvese zvakarasika.
Chinhu chakafanana chinoitika kwandiri nemitambo yekufananidza. Simcity Buildit, kana iyo isina musoro theme Park, yakachinja huzivi hwavo nekuigadzirisa nhare mbozha, kugadzira zvese, zvese zvese, zvinoda kubaya pamabhaluni anoonekwa pachiratidziri. Zvino, mitero kana matikiti haabhadhariswe otomatiki, asi akawanda mabharuni anoonekwa pane iyo skrini yese yatinofanira kudzvanya. Mukupedzisira, zvinoita sekunge mutambo uyu uri pamusoro peizvi kupfuura chero chinhu chipi zvacho.
Pindura kune lgruz
Kubhadhara kwakanaka! $ 10 madhora akatambiswa nechero munhu pane chero hupombwe kunze uko!
Pindura kuna JoseG
Ini pachokwadi handizvifarire, zvinorasikirwa nefilosofi yaMario, (ingomhanya uchirova zinga reuchi kuti riite kusvetuka) Ini ndinotamba Mario kubva pakutanga, yakawanda mifananidzo asi hapana chaakazvipa iye papuratifomu yake yekunyaradza. usabhadhara € 1 yazvo, ivo vachange vapedza maawa ekuvandudza asi ini handizvifarire uye muripo mudiki kuti ndirambe ndichitamba, ndiwo maonero angu.
Zvakanaka, kwandiri zvinogona kuita $ 50 uye ichabhadhara. Chero bedzi nzira yake yekutamba yaive ichitaurira. Kumhanya nekumhanya uku handina kumboseka zvachose. Chokwadi chaisazoitamba chero mahara.
Ndakapenga pandakaona kuti ndaifanira kuribhadharira ... ndaizobhadhara chaizvo € 0 yacho. Tiri mapenzi here? Ndiye mumwezve mumhanyi, senge ma8000 aripo. Imwe neimwe ine misiyano yadzo. Uyu chete ndiye anonzi Mario. Nongedzo. Vangadai vakaiisa mahara nema micropayments kuti uwane mabhenefiti. Dambudziko nderei neizvozvo?
Inonakidza 2 yeiyo iPad, hafu yemutengo wenguva yakatarwa
Pokémon Go ikozvino inowanika kurodha pasi paApple Watch